BBC Soomaali waxay raadineysaa gabadha ugu gabayga fiican - Latest News Updates
Fadlan, codsigaaga waxaad ku soo diri kartaa emailka ah [email protected] . Faafaahin dheeraad ah waxaad ka heli kartaa bbcsomali.com
Waxay la hadashaa dadka Soomaaliyeed ee ku sugan Bariga Afrika iyo daafaha dunida. Waxaana lagala socon karaa raadiyaha, barta internetka iyo Telefishinka. Waxa idaacadan dhegeysta todobaadkiiba dad ku dhow 3.6 milyan. BBC Somali waxay dhowaan billawdey barnaamij cusub oo Telefishin ah (halkan kala soco), waxa kale oo BB Somali laga heli karaa Twitter , Facebook iyo Instagram .
Faahfaahin dheeraad ah, fadlan la xidhiidh: [email protected]
Short URL: http://somaliweyn.org/?p=2798